Kayseri’nin Değeri Erciyes, Dünyanın Değeri Oldu – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia38 KayseriQiimaha Kayseri Erciyes wuxuu noqonayaa qiimaha adduunka
03 / 08 / 2017 38 Kayseri, Gobolka Central Anatolia, GUUD, TELPHER
Hawlaha iyo bartilmaamedyada Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri ee Erciyes waxaa loo sharaxay saxaafadda iyo dadweynaha
Kulankii saddexaad ee nashaadaad ee hal qaybood oo ka mid ah Dawladda Hoose ee Magaaladda waxaa todobaad kasta lagu qabtaa Erciyes. Kulankaas, maalgashiyada iyo yoolalka la xiriira Erciyes, oo noqday mid ka mid ah xarumaha baraf-baradka adduunka oo ay la socdaan maal-gashiga Dawladda Hoose ee Magaalada, ayaa la wadaagay saxaafadda iyo dadweynaha. Duqa magaalada Mustafa Celik, Erciyes ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii ay magaalada ugu soo kordhin lahaayeen macaash badan.
Kulankii Kayseri Erciyes A.Ş. lagu soo bandhigey gudaha Dowlada Hoose ee Magaaladda waxaa lagu qabtay Erciyes. Isagoo ka hadlayey kulanka, Duqa magaalada Mustafa Celik, wuxuu sheegay in maalgashi ay sameeyeen Dowladda Hoose ee Magaalada Erciyes 2005 sanadka ay leedahay taariikh.
Erciyes ayaa ugu horreyntii loogu talagalay inay dhammaystirto kaabayaasha codka madaxweynaha Celik, meel kasta oo adduunka ah iyada oo maalgelin noocan oo kale ah lagu sameeyay xarunta cayaaraha jiilaalka, ayay tiri degmada. Isagoo carrabka ku adkeeyay inay maalgashadeen qiime sida Erciyes oo qiimo ku soo kordhiya magaalada, Duqa magaalada Çelik ayaa yidhi, işler Markii kaabayaashii dhaqaalaha la dhammeeyay, howsha la qaban lahaa waxay ahaayeen dhiirigelinta, xayeysiinta iyo howlaha suuq geynta. Tani waa waxa aan hadda sameyno. Intaa waxaa sii dheer, Erciyes ma aha oo keliya inta lagu jiro xilliga qaboobaha si loo diyaariyo bilaha 12. Tan darteed, waxaan bilownay qodista biyo kulul. Sida ku xusan warbixinta MTA 2 kun oo mitir 200 mitir oo biyo kulul ayaa la dhihi karaa waa mid qoto dheer. Waxaan bilownay qodista heerka ugu sarreeya ee suurogalka ah. Ilaa maanta, ku dhowaad mitir 180 ayaa la gaarey. Waxaan rajeyneynaa in la soo gabagabeeyo dhamaadka sanadkan. Haddaysan ahayn sidaas, waxaan sii wadaynaa inaan la shaqeyno guga. Mashruuc aad u fiican ayaa loo diyaariyey Xarunta Xarumaha Ciyaaraha Sare ee Altitude oo aan rabno inaan ka dhigno Erciyes si aan mar labaad u isticmaalno inta lagu jiro bisha 12. Hadda mashruucyada dalabka ayaa la diyaarinayaa. Ku-biirinta Wasaaradda Dhallin-yarada iyo Cayaaraha, waxaan magaalada u keeni doonnaa xarunta weyn. Markii aan dhismeynno xarunta, waxaa jiri doona xarun kaam ay doorbidaan kooxo raba inay xero ka dhigtaan cayaaraha sida kubbadda cagta, kubbadda koleyga, kubbadda laliska iyo dabaasha. Hadafkeenu waa inaan soo jiidanno marti-sharaf badan Erciyes. Sannadkii hore waxaan kor u qaadnay tirada booqdayaasha 40 annaga oo aan ka bixinnay dhowr kanaal oo leh maalgashiga cimilada. Sannadkan waxaan sameyn doonaa sumcad aad u badan. Inta booqdayaasha badan ee aan halkaan ku soo jiidaneyno, waxaa sii kordhaya waxaan gacan ka geysaneynaa dhaqaalaha magaalada. Waxaan ka shaqeynaa sidii aan u keeni lahayn Erciyes halka ay faa iido ugu jirto magaaladeena. ”
GUUD EE SIYAASADDA CIIDAMADA OO KU SAABSAN TAHRIIBKA PROFIT GUARANTEE
Erciyes Inc. Gudoomiyaha iyo Maareeyaha Guud Murat Cahid Cıngı ayaa soo bandhigay tafaasiil kusaabsan Erciyes. Bixinta macluumadka ku saabsan halka uu Erciyes ka yimid maalgashiga Degmooyinka Magaalo Weyn, Cıngı wuxuu yiri, “Waxaa xarunta Erciyes kiiloomitir kiiloo mitir u jira 23,75. Waqtigaan, 26-27 waxay qaadi kartaa kun qof saacad gudaheed. 102 km. waxaan leenahay istiraax barafka Waxaan u diyaarinnaa dhabarooyinkaan kuwa jecel barafka maalin kasta ku dhawaad ​​mashiinnadeenna burbura. Waxaan heysanaa mashiinada barafka ee loo yaqaan '154. geedka ugu horumarsan baraf macmal ah wax soo saarka dalka Turkiga Erciyes. Waxaan ku maalgelinay ku dhowaad 20 milyan oo yuuro macaash aan dabiici ahayn. Xarumaha leh qalabka waxsoosaarka barafka dabiiciga ah sida annaga oo kale waxaa loo yaqaannaa '' Damiiniga Barakaysan ee Ski Center Merkezi ee shisheeyaha. Tani waa cunsur aad muhiim ugu ah ajaanibta. Xarumahaas la'aanteed, tartamada caalamiga ah midkoodna looma bixiyo. ”
Murat Cahid Cıngı, oo sharraxay sababaha Erciyes loogu doorbiday, ayaa yidhi, “Gawaarida casriga ee casriga ah, kaabayaasha tikniyoolajiyadda, nabadgelyada, barafka barafka ah, ku dul boodbooda dhammaan buurta hareeraha ah iyagoo leh hal tigidh, fududeynta gaadiidk a Erciyes oo laga keenay bartamaha magaalada iyo sumadda adduunka ee ku xigta Cappadocia. Faa’iidooyinkeena. Marka la barbar dhigo meelaha kale ee barafka lagu ciyaaro ee adduunka oo dhan, Erciyes wuxuu siiyaa mudnaan muhiim ah dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa shisheeyeba. ”
Cıngı wuxuu caddeeyay in huteelka 10 uu wali leeyahay awood sariirta qiyaastii 1500 oo ku taal Erciyes isla markaana 6 kun oo awoodo sariirta la gaari doono marka hoteellada kale la dhammeeyo. Murat Cahid Cıngı, Erciyes'ten hoteelada magaalada aad u daran ayaa yiri. Cıngı wuxuu kaloo xusey tababbarka barafka ee ay ku bixiyaan Erciyes waxayna sii wadeen: amaçla Waxaan aasaasnay ​​Barashada Barafka ee ujeedkan. Waxaan siinnay casharo baraf ah oo loo yaqaan '78 kun' oo ah dadka 4 oo leh macalinka barafka ee '092'. Cayaaraha sidoo kale waxbarasho siisay caruurta. Sannadkan, annagu waxaannu ku dhisi aagga ugu horeysay tababar ski Turkey ee Hisarcik albaabka. "
“MOSCOW-KAYSERI AIRCRAFT Tours waxay bilaabmi doontaa”
Wuxuu kaloo xusay tartamada caalamiga ah ee lagu qabtay Erciyes. Gudoomiyaha Cıngı, wuxuu sheegay in tartamada caalamiga ah ay gacan ka geysteen soo saarista Erciyes. Jinn wuxuu sheegay inay ka shaqeynayaan sameynta Koobka Aduunka ee sanadkaan lagu ciyaaro.
Murat Cahid Cıngı, oo isaguna ka hadlay dadaalkooda ku aaddan sidii ay dadka ugu keeni lahaayeen Erciyes, ayaa yidhi, uz waxaan ka wadnaa hawlo muhiim ah suuqa Ruushka. Waxaan rajeynayaa in sanadkan Moscow-Kayseri la dhigo. Waxaan isku dayeynaa inaan ka dhigno Erciyes mid caan ah gobolkaas. Waxaan sidoo kale shaqo muhiim ah ka qabnaa Shiinaha. Waxaan sidoo kale soo bandhigi karnaa Erciyes anagoo kaqayb qaadanayna xafladaha Berlin iyo Dubai. ” Cıngı, Erciyes kambing, fuulitaanka buurta, bushkuleeti buurta, ayaa bixiyay macluumaad ku saabsan nashaadaadka sida socodka faraska.
Erciyes Ski Center wuxuu ahaa goobtii ugu roonaa ee aduunka
Qiimaha caanka ah ee Bursa wuxuu kordhay suuqyada adduunka